Jaaamacad ka Guuraysa Imtixanka Lagu Qaado Waraaqaha | Maankaab.com
Jaaamacad ka Guuraysa Imtixanka Lagu Qaado Waraaqaha
Jaamacadda Cambrige ee dalka Ingiriiska, ayaa diyaarinaysa hannaan cusub oo imtixannaadka ardayda looga qaado. Waxa ay ardayda u ogolaan doontaa in ay imtixaannaadka ku galaan kombuyuutarada laptops iyo iPad, sababtoo waxa ay doonayaan in laga guuro habka gacan ku qorista ah oo loo gudbo tiknoolajiyada casriga ah.
Ardayda aadka ay ugu adag tahay in ay gacanta wax ku qoraan, una bahda waqtiga dheeraadka ah marka ay imtixannaadka ku jiraa ayaa hore loogu ogolaan jiray in ay isticmalaan kombuyuutarada laptops, balse arrintan waxay dhawaan noqon doontaa mid qof kasta loo ogol yahay.
Jaamacaddu waxay dib-u-habayn ku samaysay istaraatijiyada uga taala waxbarashadeeda tiknoolajiyada (Digital Strategy for Education) ku salaysa, taasoo loogu talagalay in hannaanka waxbarashada loo beddelo mid casri ah si horumar looga sameeyo tacliinta.
Dr. Sarah Pearshall oo culuumta taariikhda ka dhigta Jaamacadda Cambridge, ayaa sheegtay in gacan-ku-qoristu ay tahay hannaan laga tegay (Lost art). Waxa ay wargeyska Daily Telegraph u sheegtay; “15 amma 20 sanno ka hor waxa ardayda qasab ku ahayd in ay gacanta saacado kooban maalinta wax ku qoraan, balse hadda waxba kuma qoraan gacanta, marka laga reebo waqtiga imtixaanka. Kulliyad ahaan waxaannu sannado badan danaynay hoos-u-dhaca ku yimi gacanta oo wax lagu qoro (Handwriting) oo dhib noqotay. Aad ay ugu adag tahay ardayda iyo dadka imtixaanka qaada in farta qof qoray si fudud loo akhriyo.”
Ardayda Jaamacadda Cambridge ayaa soo dhaweeyey arrintan jaamacadoodu qorshaynayso, iyagoo sheegay in hannaanka waxbarashadu kor u kici doonto oo ardaydu fursad u heli doonaan in ay si fiican dhinaca tiknoolajiyada uga dhismaan, qof kastaana helo darajada uu xaqa u lahaa marka waqtiyada imtixaanaadka.